China Quick-Dry Qr Code Non-Porous Media 45si 2588 2706K 2589 2580 2590 Cartridge Solvent Ink maka Aka Jet Coding Printer ndị na-emepụta na ndị na-ebu ya | AoBoZi
Gịnị bụ nzuzo?
Koodu gụnyere itinye ederede, akara, akara ma ọ bụ ọdịdị ndị ọzọ na ngwaahịa ma ọ bụ ngwugwu site na iji ink. A na-eji okwu dị iche iche eme ihe, dị ka nzuzo, ibipụta ma ọ bụ kaa akara, mana ha niile pụtara otu ihe. Inye koodu nwere otutu ngwa na ebumnobi ma nwekwaa uzo di iche iche eji eme nzuzo.
Kedu ihe iji jiri nzuzo?
Site na nzuzo, ọ ga-ekwe omume ịnye onye ọrụ ozi ozugbo. Nwere ike ịgụnye iji ụbọchị, data kọntaktị na igbe mbupu, weebụsaịtị ma ọ bụ ntuziaka onye ọrụ. Site na nzuzo ị nwere ike ime ka ngwaahịa gị mata. Loose ngwaahịa, igbe ma ọ bụ pallets na-mere ka amata site barcodes, QR Koodu ma ọ bụ ụdị nọmba. Ebumnuche ebumnuche nke nzuzo bụ iji mee ka ngwaahịa mata. Nke a bụ ozi nwere ike ịdị mkpa maka ndị nrụpụta. Na ha onwe ha adịghị enye ihe ọmụma. I nwere ike na-eche nke ogbe Koodu, mmepụta data na ndị ọzọ na track & Chọpụta ọmụma.
12.7mm HP 2580/2590 mbụ ngwa-ihicha ink katrij na dakọtara 25.4mm nnukwu nozulu nnukwu font ngwa ngwa akọrọ bụ dakọtara na kasị nke handheld koodu spraying igwe na ahịa, online koodu spraying igwe desktọọpụ ule koodu spraying igwe na ndị ọzọ na-ekpo ọkụ-asụ ingfụfụ isi. , nke na-adịghị ekpuchi, nke na-adịghị ada ada, mmiri na-eguzogide ọgwụ ma nwee nnukwu okpomọkụ, na akụkọ nyocha.
Oge ihicha ngwa ngwa nke 2-3 sekọnd
Long decap oge nke ihe karịrị otu awa
Mgbochi mmiri, Mgbapu mmiri
Ezigbo njupụta na oke ọchịchịrị ọbụlagodi na ala dpi
Ihe oyiyi dị elu nke nwere nkọ dị nkọ
At Kwekọrọ n'Ozizi na
2580 / 2588M / 2588 + M / 2588K / 2586 / 45si / FOL13B, wdg
Plastic, Nchịkwa Achịkwa, Ngosiputa Ngwa, Beverage Baker, Woodiness Board
Nkwakọba Nri, Akwa Ọhụrụ, Marble I Iomi
Ọ bụrụ na ejighị katrij ink, ọ ga-ekpuchi ya mkpuchi. Mgbe ink katrij na-adọwa emeghe ma kaa akara, ọ kasị mma iji ya n'ime ọnwa 3-4.
Nke gara aga: TIJ 2.5 Teknụzụ Original Ink Cartridge maka HP 45A 51645
Osote: Mmiri Dabere Bottle mejupụta HP 45A ink katrij maka Handheld nzuzo na-ebi akwụkwọ Printing na Akwụkwọ katọn
Ndị na-ebi akwụkwọ ntanetị / ndị na-emepụta ihe eji emepụta ihe na koodu maka ...
18ml ewute ntụ ntụ Agba Calligraphy Ide P ...
Ink ink maka Epson / Mimaki / Roland / Mutoh / Canon ...
Environment Friendly Eco Ihe mgbaze ink maka Roland ...
Na-adịgide adịgide welara Pen Ink dee na Metals, Pla ...